एन आर एनमा महासचिव शर्मा र सदस्य सिम्खडाद्धारा अध्यक्ष पन्तलाई फसाउने तयारी « Bikas Times
एन आर एनमा महासचिव शर्मा र सदस्य सिम्खडाद्धारा अध्यक्ष पन्तलाई फसाउने तयारी
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरराष्ट्र्यि समन्वय परिषद्का महासचिव डा. हेमराज शर्मा र आईसिसि सदस्य रामशरण सिम्खडाले केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तलाई विवादमा पार्ने तयारी गरेका छन ।
एनआरएनए यूके स्थापनाको १५ आंै स्थापना दिवस जस्तो चरम विवादित कार्यक्रममा आईसिसि अध्यक्ष पन्तलाई प्रमुख अतिथि बनाउने नाममा विवादमा पार्न लागेका हुन् । महासचिव हेमराज शर्मा, आईसिसि सदस्य तथा कार्यक्रम संयोजक सिम्खडा र पत्रकार चिरन शर्मालगायतले पन्त आएपछि यहाँको विवाद समाधान हुने भन्दै रिपोटिड गरेका थिए । बेलायतका विवादबाट टाडै रहने सोच बनाएका पन्तलाई बेलायत आए सवै मिल्ने आश्वासन तिनै जनाले दिएका छन ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रमा महासचिव शर्माले केही गर्न नसकेको तथा एनआरएनए यूके नेतृत्वले आफ्नै कार्यसमितिका ४ जना उपाध्यक्ष मिलाउन नसक्ने अवस्थामा केन्द्रीय अध्यक्षले मिलाउन सक्ने कुरै भएन । तैपनि तपाई आए सवै मिल्छ भन्दै पन्तलाई बेलायत झिकाई नेपाल समुदायमा शक्तिशाली देखाउन प्रयास भैरहेको स्रोतले बतायो । शालिन स्वभावका अध्यक्ष पन्तलाई बेलायतका बारेमा उनीहरुले जे सुनाउँछन त्यही थाहा हुने हो । अरु व्यक्तीसँग नमस्कार आदानप्रदान बाहेक केही कुरा हुने गरेको छैन । केन्द्रीय महासचिव शर्मा लन्डनबाट निकै टाडा लिभरपुल बस्छन । उनलाई यहाँका समाजका बारेमा खासै केही थाहा छैन । यहाँको बारेमा सवै उनका सहोदर भाई चिरन शर्माले जानकारी गराउने हुन । भाई शर्मा पत्रकारितामा वदनाम र समाजमा वेइमान व्यक्तिका रुपमा परिचित छन ।
पद विना बस्न नसक्ने सिम्खडालाई जसरी पनि अध्यक्ष पन्तलाई फसाएर बद्नाम गरि प्रवक्ता नपाएको बदला लिनु छ । अध्यक्ष पन्तले पद नदिएपछि उनका विरुद्ध सामाजिक संजालमा खाए खा नखाए घिच भनेर असन्तुष्टी पोख्न समेत भ्याएका थिए । आर्थिक रुपमा विवादीत व्यक्ती सिम्खडाले संयोजन गरेका कार्यक्रमका विरुद्ध एनआरएनए यूकेका चार उपाध्यक्षले बुधबार साँझ लन्डनमा पत्रकार सम्मेलन गरि अध्यक्ष पन्तलाई कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन ।
विहान साढे १० लन्डन उत्रिन लागेका अध्यक्ष पन्तलाई कालो झण्डा देखाउने तयारी भैसकेको छ । त्यसका लागि ५० वटा कालो झण्डा र यूवायूवति तयार अवस्थामा रहेको स्रोतले जनायो । बेलायती समुदायमा महासचिव डा. हेमराज शर्मा, उनका भाई चिरन शर्मा र आईसिसि सदस्य सिम्खडाको आचरण र कृयाकलापको बारेमा ज्ञान भएपनि अध्यक्षमा धाधली गर्न साथ दिएका कारण उनी बेलायत आउन लागेका हुन । तर, पन्तलाई फसाएर उनीहरु आफु जस्तै बनाउन चाहान्छन भन्ने बारेमा अध्यक्ष पन्त अनविज्ञ छन । बेलायतमा एनआरएनएको जन्मभूमि मानिए पनि कुनै पनि अध्यक्षले कालो झण्डा देख्नु परेको छैन ।
बेलायतबाट अध्यक्ष पन्त विरुद्ध कालो झण्डा प्रदर्शन भयो भने यो ८२ वटै एनआरएनएमा पुर्याउने उनीहरुको तयारी छ । जसले गर्दा कुमारले दुई बर्षे कार्यकाल प्रस्टीकरण दिदै जानेछ । स्रोतका अनुसार कुमार पक्षधरले अहिले बेलायत नआउन सुझाएका छन । , यो विवादको भूमरीमा शर्माद्धय र सिम्खडाका कारण अध्यक्ष विवाद पर्नु हुन्न । यदी कुमार आए भने त्यो पन्तको जीवनकै ठुलो भूल हुनेछ, स्रोतले चेतावनी शैलीमा अध्यक्ष पन्तलाई सम्झाएको दावी गरेको छ । बुधबार एनआरएनए यूके उपाध्यक्षहरुले कालो झण्डा देखाएर केन्द्रीय अध्यक्ष पन्तको विरोध भए जिम्मेवारी नलिने बताईसकेका छन । यसलाई विरोधको संकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।